Ọ bụ macOS Monterey ọhụrụ nke nwere ụzọ mkpirisi, Njikwa Universal na ihe ndị ọzọ | Esi m mac
Emeela ka MacOS 12 Monterey pụta ìhè n'ehihie a na WWDC nke Apple. Cuplọ ọrụ Cupertino na-agbakwunye ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na-atọ ụtọ na sistemụ nrụọrụ a anyị nwere ike ịsị na ọ "na-aga n'ihu" n'ihe banyere nnukwu macOS Big Sur. Nke a bụ ihe anyị niile tụrụ anya ma n’ikpeazụ, a kpọrọ sistemụ arụmọrụ ma gosipụta maka Macs anyị hụrụ n’anya.
Anyị ga-ebido na mbata nke Shortzọ mkpirisi maka Mac. Njirimara nke doro anya na ketara n'aka sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ yana ha na-anwa ijikọ na Automator iji mee ka ọrụ dị mfe maka onye ọrụ na kọmputa ha. Ma Ihe kacha ju anya bụ ihe ọhụrụ a na-akpọ njikwa Universal, ọrụ nke na-enye anyị njikọ dị mma n'etiti iPad na Mac site na iji pointer si n'otu ebe gaa ebe ọzọ mgbe anyị debere ngwaọrụ ndị a n'akụkụ. Ma e nwere ihe ndị ọzọ ...
Dị ka ọ dị na Apple, mmelite nke sistemụ arụmọrụ Mac ga-abụ kpam kpam n'efu maka ndị ọrụ niile na ha nwere ike iwunye ya na ha. Apple ezi uche anaghị ana maka ihe ọ bụla nke ndị a mmelite na oge a na ọ ga-abụ isịneke ma.
1 Tinyekwuo iPadOS na macOS na njikwa Universal
1.1 Uzo mkpirisi di ebe a ka ịnọ na Mac
Tinyekwuo iPadOS na macOS na njikwa Universal
Iji kwuo na nke a bụ nhọrọ nke juru anyị anya nke ukwuu n'etiti ọtụtụ mmelite nke ọhụrụ macOS 12 Monterey na-agbakwụnye, mmelite a kọwara n'ụzọ dị mfe bụ nke ike ihe mmezi ihuenyo iPad mgbe ọ na-nọ na-esote Mac Na ihe niile ndị a enweghị ezi uche maka eriri ma ọ bụ ụdị njikọ anụ ahụ.
Onye ọrụ ahụ ga-emetụ trackpad ahụ aka ma bugharịa pointer ahụ site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ iji si n'otu ihuenyo gaa na nke ọzọ dị ka a ga-asị na ọ bụ site anwansi. Ọrụ a -enye gị ohere ịdọrọ faịlụ site na otu kọmputa ọzọ ya mere ọ bụrụ na ị na-edezi vidiyo na iPad Pro ị nwere ike ịrụcha ọrụ na Mac gị.
Airplay nye Mac ga-abụ ihe mmelite ọzọ etinyere na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ a nke Apple na-anọdụ taa. Na ọrụ a, onye ọrụ ga-enwe ike, dịka ọmụmaatụ, ịgafe abụ a na-akpọ na iPhone na Mac anyị. Ọrụ na-atọ ụtọ maka ndị ọrụ na-eme ihe kacha mma airplay.
Uzo mkpirisi di ebe a ka ịnọ na Mac
Nke a abụrụla ọrụ ndị ọzọ kwụpụtara na ngosipụta nke sistemụ arụmọrụ ọhụrụ. Ngwa mkpirisi na-ewu ewu ga-adị ugbu a dịkwa maka ndị ọrụ macOS Monterey na-enye ọtụtụ ohere nke ga-abịa na aka Automator na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ Cupertino.
E wezụga ihe a niile tHa emeela mgbanwe ndị na-adọrọ mmasị na ihe nchọgharị gọọmentị Apple, Safari. Ihe nchọgharị a dị mkpụmkpụ karịa na usoro nke njirimara onye ọrụ ma ugbu a enwere ike ịhụ taabụ n'ụzọ doro anya karị, na-ewe obere ohere na ihuenyo ahụ.
Safari ugbu a gụnyere nhọrọ iji tinye taabụ site na otu, nke pụtara na ị ga-enwe ike ijikwa ibe weebụ kachasị amasị gị n'ụzọ doro anya. N'ihe atụ ahụ egosiri anyị nhọrọ iji zukọta ịzụ ahịa, ọrụ, oge ezumike, wdg. ibe weebụ n'otu n'otu ma eziokwu bụ na ọ dị anyị ka ọtụtụ ihe. ezi echiche maka ndị anyị nwere ọtụtụ taabụ meghere n'otu oge na Mac.
Agbakwunyela mgbanwe na FaceTime, ọ melitela ọrụ ma ọ bụ kama ọ bụ ọrụ ndetu ma na nkenke, ha enyela ezigbo nsụgharị maka ụdị ọhụrụ nke macOS. Anyị nwere ike inwe afọ ojuju na mgbanwe ndị a agbakwunyere ọ bụ ihe ọhụrụ ole na ole ma ọ bụ tweaks ziri ezi na tweaks dị mkpa ka emere n'ime sistemụ arụmọrụ na-adịgide adịgide kwa se. N’ụzọ ezi uche dị na ya, ụdị macOS 12 a ga - adaba na ngwaọrụ niile nwere mgbawa M1 ọhụrụ yana ụdị ndị gara aga na - akwado macOS Big Sur ka ị gaghị enwe nsogbu ịwụnye ya na Mac ọhụrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Ọ bụ macOS Monterey ọhụrụ nke nwere ụzọ mkpirisi, Njikwa Universal na ndị ọzọ
Apple na-ewebata ọrụ iCloud + na WWDC 2021